Apple Music Festival, Apple Watch Series 2 chiziviso, macOS Sierra kuenderana, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac | Ndinobva mac
Peter Rhodes | | Apple Watch, dzakawanda
Mumwezve Svondo, vapepeti veSoy de Mac vanokuunzira kuunganidzwa kweanonyanya kutaurwa nezvenhau munyika yeapuro yakarumwa. Ranga riri svondo rakabatikana uye nderekuti kuvhurwa kweMacOS Sierra kwaunza shanduko zhinji kuApple komputa system uye kune vazhinji vashandisi vari kukwakuka kusisitimu nyowani kunyangwe pandiri kunyora idzi mitsara.
Nechikonzero ichi, mazhinji ezvinyorwa zvakaburitswa svondo rino zvakaitirwa kubatsira zviuru zvevashandisi vanotiverenga uye paine kumwe kuvandudzwa kwesystem senge otomatiki kuwiriranisa neICloud yedesktop uye Zvinyorwa maforodha izvo zvavanounza zvinopfuura imwe. kana mumwe pasi panzira inovava.
Zvisinei, vhiki rakapera takatanga nekuzivisa izvozvo iyo Apple Music Festival yakatanga. Elton John aive pamusoro pekuvhura iyo 10th Apple Music Festival, na21: 30 pm nguva yeSpanish. Yakatanga husiku hwakati wandei hwemakonzati anozoguma nemusi wa30. Makonati ayo Apple anotipa pane zvese zvishandiso, kunyangwe zvinogara zvichikurudzirwa kuatarisa kubva kuApple TV kuti vakwanise kuanakidzwa nekuwedzera kusimba. Kunge gore rapfuura ne Ellie kubaya, muBritish muimbi aive nerukudzo rwekuvhura mutambo uyu kubva ku London Roundhouse.
Wedu watinoshanda naye Javier Porcar akasimudza zvinyorwa zvekubatsira zveiyo nyowani macOS Sierra achitaura nezve matsva maficha akaitwa muKutsvaga zvimwe chete. Makore apfuura, vagadziri vakatora mukana nekushayikwa kwesarudzo dzekuunza kumusika "vitaminized" Tsvaga yakasangana nezvinotarisirwa nevashandisi vakanyanya mukutonga kwefaira. Ichokwadi kuti iyo Apple system ine chakavanzika chombo, kuiswa kwe Automator kuzadza zvakawanda zvezvikanganiso zve Finder. Asi chero zvakadaro, kunyanya kune vashandisi vasina hunyanzvi kana vanongoda zvekutanga sarudzo, Apple inosarudza kuunza maficha matsva kuKutsvaga muMacOS Sierra.
Anenge makore maviri mushure mekuratidzwa kwepamutemo kwemhando yekutanga yeApple Watch, iyo Cupertino-based kambani yakaratidza chizvarwa chechipiri chekambani smartwatch munaGunyana 7. Pakati pezvinhu zvitsva zvatinowana muchizvarwa chechipiri izvi pane processor nyowani, inopenya OLED skrini, yakabatanidzwa GPS pamwe nekusavhara mvura, kusvika pamamita makumi mashanu pakadzika. Kuti iite kuti isashome mvura, kunze kwekuisa chisimbiso chose pachigadzirwa, Apple yakachinja mutauri anoshandiswa mune yekutanga modhi yeanodzosera mvura uye akagadzirirawo kuramba kumanikidzwa nemvura. Ichi ndicho chiziviso chekutanga cheichi chitsva cheApple Watch Series 2.
Chinyorwa chine chokwadi chekukufarira ndicho chatakakurukura kuti Apple macomputer anowirirana neiyo nyowani macOS Sierra. Chero pese panenge paine kuvandudzwa kweiyo inoshanda sisitimu, chero zvazvingava, kusahadzika kunotirova uye ichi chinhu chisingafanirwe kuitika kwatiri panguva ino asi zvinoitika kwatiri. Saka tinokuyeuchidzai zvakare ayo ari Mac anoenderana neMacOS Sierra 10.12.
Isu tinogadzira mabharanzi mashoma kukuratidza imwe yekutanga unboxing yeAirPods nyowani iyo Apple yakaratidza mune yekupedzisira Keynote. Kusvika parizvino, ini ndakanga ndisingakwanise kuona chero vhidhiyo mune chero svikiro yaive isiri yeKeynote test room munaGunyana 7, uye iri iro vhidhiyo ratinoisa muchinyorwa chino inotiratidza a unboxing yeyuniti chaiyo yeaya mahedhifonis.
Tiri kutarisana neiyo nyowani Apple inoshanda sisitimu yeMac uye kana tangove nayo inotorwa kukomputa yedu izvo zvatinokurudzira kuita kumisikidza kubva pakutanga kubvisa chero zvasara zvekubvisa zvikumbiro, zvikanganiso kana chero chinhu chingakanganisa chiitiko neiyo nyowani vhezheni yesystem. Ichokwadi ndechekuti mhando iyi yezvakakosha zvinogadziridzwa inokurudzirwa kuzviita kubva pakutanga kunyange hachisi chinhu chakakosha, ndiko kuti, Kana iwe usiri kuda kuisa macOS Sierra kubva pakutanga, ingo kurodha pasi kubva kuMac App Chitoro uye tinya pakuisa. Pamberi, isu tinokukurudzirawo kuti uite backup kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, asi musimboti haina chakavanzika chinopfuura icho. Zvino kana iwe uri kuverenga izvi imhaka yekuti iwe unoda kuisa macOS Sierra kubva pakutanga paMac yako, saka Ngatione nhanho dzekuzviita kubva paBootable USB.
Uye isu takagumisa kusangana kwedu nenhau dzaitaura nezve iyo kuisirwa kwechitatu-bato kunyorera mu macOS Sierra. Nguva dzese apo Apple painotangisa vhezheni nyowani yesystem yayo yekushandisa, kuwedzera kune zvekushongedza uye zvinoshanda zvitsva kuitira kuti vashandisi vasarase kufarira kwavari, kambani inogara ichiedza kuve nechokwadi chekuchengeteka kwedu. Uye seuchapupu hweizvi isu tine zvigadziriso zvinoramba zvichiburitswa kuti tigone kugadzirisa chero dambudziko rekare, razvino kana ramangwana rekuchengetedza. Asi zvakare gadziridza dzimwe sarudzo sisitimu yekushandisa kuti ubvise sarudzo paunenge uchiisa kana kuita shanduko kuhurongwa. MacOS Sierra yave ichiwanikwa yekurodha kwemazuva mashoma ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Music Festival, Apple Watch Series 2 chiziviso, macOS Sierra kuenderana, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac